अमेरिकाले भेनेजुएलाको अरबौं डलर हडपेर, सुन चोरेर कुहिएको खाद्यान्न सहायता गर्न खोजिरहेको छ | Ratopati
ग्युरिन : अन्तरवार्ताका लागि हामी बस्दै गर्दा अमेरिकाले पठाएको सहायता कोलोम्बियामा थन्किएका छन् । यहाँ हामीले धेरै मानिस भेट्यौँ, जसले आफ्ना लागि सहायताको अत्यन्त आवश्यकता रहेको बताए । किन सहायता रोक्नुभएको ?
मदुरो : सबैभन्दा पहिलो कुरा, अमेरिकाले कोलोम्बिया सरकारसँग मिलेर भेनेजुएली जनताको अपमान गर्न यो प्रपञ्च बुनिएको हो । भेनेजुयला आफ्ना जनताका सबै आवश्यकता पँरा गर्न सक्ने क्षमता भएको देश हो ।
ग्युरिन : तपाईंले मानवीय सहायतालाई देखावटी भन्नुभयो । के वास्तवमा तपाईं भोकलाई पनि देखावटी नै देख्नुहुन्छ ? हामीले आफ्नै आँखाले भोक देख्यौँ । मैले पाँच बच्चाकी आमालाई भेटेको थिएँ । उनी भन्दैथिइन्, मेरा बच्चाहरू हरेक रात भोको पेट सुत्छन् । यहाँबाट केही पर मात्र हामीले मानिसहरू खाना खोज्दै फोहोरको डङ्गुर चलाइरहेको देख्यौँ । के तपाईं इमानदारीका साथ भेनेजुएलामा भोक छैन भन्दै हुनुहुन्छ ?
मदुरो : म तपाईंलाई भन्दैछु, लन्डनको बीबीसीले भ्रमको खेती गरिरहेको छ । अमेरिकी मिडियाहरू पनि त्यही गर्दैछन् । भेनेजुएलामा के भइरहेको छ भन्नेमा उनीहरू गलत प्रचार गरिरहेका छन् । भेनेजुएलामा चरम गरिबी र अभाव ४.४ प्रतिशत छ । निःसन्देह हामीले सुधार्न बाँकी विषय धेरै छन् । तर, कँल २५ प्रतिशत चरम गरिबीबाट हामी आजको स्थानमा आइपुगेका हौँ । हामीले असमानताका अरू पनि मानक घटाइसकेका छौँ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको हिसाबमा भेनेजुएला सबभन्दा उच्च सामाजिक समानता भएको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनले पनि स्वीकारेको विषय हो ।
म अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तिमीले बैङ्क खाताहरूबाट १० अर्ब अमेरिकी डलर हडपेका छौ । उनीहरूले लन्डनमा सुनको रूपमा अरर्बौं अरब डलर चोरेका छौ । त्यो पैसाले हामी दैनिक आवश्यकताका वस्तु, कच्चा सामग्री, खान र औषधि किन्न सक्थ्यौँ ।
ग्युरिन : राष्ट्रपति मदुरो, मैले तपाईंको भनाइ बुझेँ । तपाईं भेनेजुएलामा कुनै प्रकारको मानवीय सङ्कट नभएको भन्दै हुनुहुन्छ । यदि तपाईंको यो विश्वास नै सत्य भए भेनेजुएलाबाट किन ३० लाखभन्दा बढी मानिस देश छोडेर गए ? त्यति मानिस भनेको भेनेजुएलाको कुल जनसङ्ख्याको एक दसांश हो । अमेरिकाले भेनेजुएलाबाट हरेक दिन ५ हजारको दरले मानिसहरू देश छोडेर गएको बताइरहेको छ । यदि कुनै सङ्कट नभएका किन ती मानिसहरू आफ्नो देश छोडेर गइरहेका छन् ?
मदुरो : पश्चिमा मिडिया सबैमा एउटा समस्या छ । कुनै पनि प्रचारमा ल्याइएका झुठा कुरालाई पनि तपार्इंहरू तथ्यको रूपमा बुझ्नुहुन्छ । भेनेजुएलालाई जोडेर प्रचारमा ल्याएको अप्रवासनको अभियान अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजी हुन् । भेनेजुएला त आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने देश हो । हामीले आप्रवासीलाई स्वागत गरेको कुरा त तपाईंहरू लेख्नुहुन्न, प्रसारण गर्नुहुन्न । कोलोम्बियामा भएको युद्धका कारण भेनेजुएलामा ५८ लाख कोलोम्बियालीहरू बस्दै आएका छन् । युद्धको समयमा कोलोम्बियामा भएको मानवअधिकार हनन र चुलिँदो अभावका कारण उनीहरू भेनेजुएलामा बस्न आएका हुन् । भेनेजुएलामा ३ लाखभन्दा बढी इटालियन, ३ लाखभन्दा बढी पोर्चुगिज, ३ लाखभन्दा बढी स्पेनी र लाखौँ अरबी जनता बस्छन् । ३ लाखभन्दा बढी इक्वेडरका मानिसहरू र त्यही सङ्ख्या पेरुभियाली जनता बस्छन् ।
पश्चिमा देशहरूमा भेनेजुएलाको अवस्थाबारे भ्रम प्रचार गर्ने खाका स्थापित बनाइएको छ । त्यो खाकाले कुनै पनि हस्तक्षेप र हमलालाई सही ठहर्याउन खोजिएको छ । अहिले भइरहेको यही हो ।
गएको वर्ष सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा मात्र कति जना कोलोम्बियाली जनता भेनेजुएलामा आए थाहा छ ? १ लाख २० हजार कोलोम्बियाली जनता भेनेजुएला आए । उनीहरू थपिए पछि भेनेजुएलामा कोलोम्बियालीको सङ्ख्या ५८ लाख पुगेको हो । यो कसैले भन्न नचाहेको सत्य हो । पश्चिमा देशहरूमा भेनेजुएलाको अवस्थाबारे भ्रम प्रचार गर्ने खाका स्थापित बनाइएको छ । त्यो खाकाले कुनै पनि हस्तक्षेप र हमलालाई सही ठहर्याउन खोजिएको छ । अहिले भइरहेको यही हो ।
ग्युरिन : तर राष्ट्रपति मदुरो, तपाईंले हरेक दिन ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू कोलोम्बियातिरबाट देश छोडिरहेका छन् । तपाईंकै तथ्याङ्कलाई नै सही मान्दा पनि ८ लाख मानिस त देश छोडिसकेका रहेछन् । किन झण्डै दस लाख मानिस देश छोडेर जानुपर्यो ? अनि तपाईं अझै पनि देशमा मानवीय सङ्कट छैन भन्नु हुन्छ ?
मदुरो : तपाईंले हामीले सामना गरिरहेको आर्थिक युद्ध र वित्तीय अप्ठ्यारालाई देख्नुपर्छ । संसारको कुनै पनि कुनामा भेनेजुएलाको नाममा रहेको बैङ्क खाता खोजी पत्ता लगाइएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पारेकै छ । केही भेनेजुएली जनता सामाजिक सञ्जालका प्रचारबाजीका कारण विदेश गएर कुनै वैकल्पिक प्रकारको रोजगारीको खोजीमा लागेका छन् । शैक्षिक रूपमा उच्च योग्यता भएका भेनेजुएलीहरू नै विदेश गएका छन् । विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापकहरू विदेशिएका छन् । निकै राम्रो क्षमता भएका मानिसहरू बाहिरिएका छन् । उच्च प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरू विदेशमा कुनै विकल्पको खोजी गर्न गएका हुन् । तर उनीहरूले त्यहाँको अवस्था अझ भयावह भएको अनुभव गरेका छन् । आर्थिक कारणले विदेशिएका ती भेनेजुएली जनतामध्ये अधिकांश घर फर्कनेमा तपाईं ढुक्क भए हुन्छ ।
ग्युरिन : तपाईंले यहाँ देखिएका कतिपय समस्या अरू देशमा देखिने भन्नुभयो । तर राष्ट्रपति महोदय गएको साल त भेनेजुएलाको मुद्रास्फीति दर त निकै उच्च थियो । १० लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखियो । संसारका कुनै पनि देशले यति अचाक्ली मुद्रास्फीति त अनुभव गरेको थिएन । तपाईं राष्ट्रपति पदमा आउँदा यहाँको मुद्रास्फीति दर २० प्रतिशत थियो । के तपाईंलाई यो आर्थिक दुरावस्थाको निम्ति तपार्इंको कुनै सम्बन्ध भन्दै हुनुहुन्छ ?
हामी कहाँ आर्थिक हमलाका समस्या छन् । तर, ग्युरिन तपाईं आफै भन्नुहोस्, दस लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा संसारको कुन देश टिक्न सक्छ ? तर, तपाईंहरू त्यसैलाई सत्य मानिदिनुहुन्छ । भेनेजुएलाको विरोधमा हुने बित्तिकै तपाईंहरू कुनै अङ्कलाई समेत प्रश्न गर्नुहुन्न ।
मदुरो : म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, तपाईं पश्चिमा मिडियामा आएका कुरालाई नै आधार बनाइरहनुभएको छ । म तपार्इंलाई भेनेजुएलाको अवस्थाबारे गरिहाइमा बुझ्न आग्रह गर्न चाहन्छु । निःसन्देह हामी कहाँ आर्थिक हमलाका समस्या छन् । तर, ग्युरिन तपाईं आफै भन्नुहोस्, दस लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा संसारको कुन देश टिक्न सक्छ ? तर, तपाईंहरू त्यसैलाई सत्य मानिदिनुहुन्छ । भेनेजुएलाको विरोधमा हुने बित्तिकै तपाईंहरू कुनै अङ्कलाई समेत प्रश्न गर्नुहुन्न । भेनेजुएलाको विषयमा भनिएका कुनै पनि झुठप्रति तपाईंहरू आलोचनात्मक रूपमा समेत हेर्नुहुन्न ।
हो, तपाईंहरू यस्तै हुनुहुन्छ । बीबीसी यस्तै छ । सीएनएन यस्तै छ । तपाईंहरू पश्चिमा मिडिया हुनुहुन्छ किनभने तपाईंहरू हाम्रो देशमा हस्तक्षेपको खाका बोकेर आइरहनुभएको छ । पश्चिमका लागि भेनेजुएला किन यति चासोको विषय बन्ने गरेको छ ? अमेरिकाका लागि भेनेजुएला किन यति चासोको विषय बनेको छ ? हामीले आलु उत्पादन गरे, हामीले धनियाँ उत्पादन गरे, हामीले स्याउ उत्पादन गरे सम्भवतः हामी त संसारको भूराजनीतिक नक्सामा अस्तित्वमा हटाइसकेका हुन्छौँ ।
ग्युरिन : तपाईंलाई हामीले कुनै विचार पहिले नै बोकेर आएको जस्तो लागेको रहेछ । दुई साताअघि म पहिलो पटक भेनेजुएला आएको हुँ । यसक्रममा हामी स्वयंले यहाँको जीवन अवस्था नियालेर हेरेका छौँ । हामीले एक जना क्यान्सरको रोगी युवकलाई भेटेका छौँ । उनकी आमालाई बायोप्सीको पैसा लाग्ने बताइएको रहेछ । बायोप्सीका लागि तिर्न पुग्ने पैसा कमाउन उनको आमालाई कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने रहेछ । क्षयरोगीले थलिएका एक जना बिरामीलाई पनि हामीले भेटेका थियौँ । औषधि अभावका कारण उनको उपचार भइरहेको थिएन । ब्रेन ट्युमर भएका एक जना युवकलाई पनि भेटेका थियौँ । उनले शल्यक्रियाको एक वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको बताए । शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्रीको जोरजाम गर्ने उनकै जिम्मेवारी रहेछ । म स्वयम्ले यी मानिसहरूसँग भेटेर उनीहरूका अनुभव आफैले सुनेको हुँ । उनीहरूलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मदुरो : हामीले यही विषयमा लडाइँ लडिरहेका छौँ । युरोक्लियरमा हडपेको १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमध्ये आधा पैसा त मधुमेह र क्यान्सर रोगका औषधिका लागि थियो । त्यो पैसा त्यहीँ रोक्का गरिएको छ । अनि हामीले पोर्चुगलबाट पनि प्रयास गर्यौँ । त्यहाँ पनि २ अर्ब अमेरिकी डलर रोक्का गरियो । तथापि हामीले औषधि किन्न सफल भयौँ । यो ज्यादै ठूलो प्रयासबाट सम्भव भएको थियो । हामीले जस्ता समस्या सामना गर्यौँ, त्यस्तो समस्या त अरू कुनै पनि देशले सामना गरेन होला ।
आर्थिक नाकाबन्दी र आर्थिक तगाराबीच पनि हामीले यसरी जनतासम्म सेवा बिस्तार गरिरहेका छौँ र निकै मिहिनेतका साथ सबै बन्दोबस्त गरिरहेका छौँ । हामीले औषधि कारखाना र राष्ट्रिय औषधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । नाकाबन्दी नलगाइएको देशको तुलनामा हामीले तीन गुणा बढी मिहिनेत गरेर यो सबै कुराको व्यवस्था गरिरहेका छौँ ।
ग्युरिन : तर मानिसहरूले औषधि किन्न सकिरहेका छैनन् । औषधि त होला तर हामीले त्यस्ता मानिस भेट्यौँ, जसले दुई बट्टा एन्टिबायोटिक किन्न पूरै महिनाभरीको तलब लाग्ने भन्दै थिए ।
मदुरो : पहिलो कुरा त तपाईं शल्यक्रिया गरिएका र उपचार गराइरहेका केही मानिसका एकाध घटनाको कुरा गरिरहनुभएको छ । ढुक्क हुनुहोस्, भेनेजुएलाको स्वास्थ्य प्रणाली उनीहरूसम्म पक्का पुग्नेछ । चिकित्सा प्रणालीले गर्नुपर्ने सबै काम उनीहरूको सन्दर्भमा पनि गर्नेछ । औषधि वितरणको प्राथमिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा संसारका अरू कुनै पनि देशको भन्दा हाम्रो देशमा उत्तम बन्दोबस्त छ । हामी कहाँ पारिवारिक चिकित्सकको पनि व्यवस्था छ । ३० हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरू समुदाय र गाउँगाउँमा परिचालित छन् । चिकित्सकहरू स्वास्थ्य चौकीमै बसेर मात्र जनताको सेवा गर्दैनन् । उनीहरू जनताको घर–घर पुगेर जनताको सेवामा अहोरात्र खटिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्य चौकीमा होस् वा घर–घर पुग्दा होस्, चिकित्सकले जनतालाई आवश्यक पर्ने औषधि आफै बोकेर लगेका हुन्छन् । आर्थिक नाकाबन्दी र आर्थिक तगाराबीच पनि हामीले यसरी जनतासम्म सेवा बिस्तार गरिरहेका छौँ र निकै मिहिनेतका साथ सबै बन्दोबस्त गरिरहेका छौँ । हामीले औषधि कारखाना र राष्ट्रिय औषधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । नाकाबन्दी नलगाइएको देशको तुलनामा हामीले तीन गुणा बढी मिहिनेत गरेर यो सबै कुराको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रमार्फत भएको औषधि आपूर्ति र बिक्री वितरणलाई नियमित बनाइरहेका छौँ ।
ग्युरिन : तर, हामी यहाँबाट नजिकै एउटा अस्पतालमा पुग्दा त्यहाँ इन्सुलिन नभएको पायौँ । उनीहरूसँग इन्सुलिन नभएको पाँच वर्ष भइसकेको रहेछ । उनीहरूसँग आधारभूत औषधि पनि रहेनछ । काराकसकै एउटा सार्वजनिक अस्पतालको अवस्था यस्तो छ भने भेनेजुएलाका अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो भयो होला ?
मदुरो : मैले भेनेजुएलाको कुनै भूभाग वा काराकसको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । म समस्याले पिल्सिएको सिङ्गो भेनेजुएलाको विषयमा कुरा गर्दैछु । उनीहरू (पश्चिमा शक्ति) हाम्रो नाक मुख बन्द गरिदिन्छन् अनि सोध्दैछन्, तिमी कसरी निस्सासिरहेका छौ ? तपाईंको प्रश्न यही हो । तपाईंहरू सबै कुरामाथि प्रश्न गर्नुहुन्न । वित्तीय कारबाही, नाकाबन्दी र पश्चिमबाट, लन्डनबाट तपाईंहरूले बोकेको सोचको अभिप्राय भनेको निस्सासिएको मानिसलाई मार्ने र सिध्याउने हो ।
ग्युरिन : तर, गएको साल भएको निर्वाचनलाई तपाईंको विजयलाई त धेरै मानिसले स्वीकारेका छैनन् । भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा हुवाँ गुइएडोलाई स्वीकार्ने सरकारको सङ्ख्या पचासभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
तपाईं कतिको वस्तुगत र विश्वसनीय पत्रकार हो भन्ने कुराको तय गर्ने जिम्मेवारी तपाईंमै भर पर्ने कुरा हो । नभए तपाईं यहाँ भेनेजुएलाविरुद्ध आफ्नो प्रचार युद्ध, बीबीसीको प्रचार युद्ध र पश्चिमाहरूको प्रचार युद्धको पुष्टि मात्र गर्न आउनुभएको प्रमाणित हुनेछ ।
मदुरो : पचास रे, यो सङ्ख्या तपाईंले कहाँबाट ल्याउनुभयो ? तपाईंसँगको यो मनको लड्डु कतिसम्म सही हो– होइन, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । तपाईंले यो बुझाइमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । म तपाईंलाई केही भन्दिनँ । तपाईं कतिको वस्तुगत र विश्वसनीय पत्रकार हो भन्ने कुराको तय गर्ने जिम्मेवारी तपाईंमै भर पर्ने कुरा हो । नभए तपाईं यहाँ भेनेजुएलाविरुद्ध आफ्नो प्रचार युद्ध, बीबीसीको प्रचार युद्ध र पश्चिमाहरूको प्रचार युद्धको पुष्टि मात्र गर्न आउनुभएको प्रमाणित हुनेछ ।
ग्युरिन : तर के तपाईं यो तथ्याङ्कमा विमति राख्नुहुन्छ ? विपक्षी नेता हुवाँ गुइएडोलाई पचासवटा देशले मान्यता दिइसकेको कुरा तपाईं मान्नुहुन्न ?
मदुरो : म सहमत हुने नहुने कुरा होइन, कुरा तपाईं झुठ बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो । तपाईं त्यस्तो व्यक्ति हो जसले जडता व्यक्त गर्नुहुन्छ । भेनेजुएलाविरुद्ध पश्चिमाको जडता तपाईंहरू प्रचार गर्नुहुन्छ । तपाईं जड हुनुहुन्छ । आफूले भनेको कुरा कति सही हो– होइन समेत परीक्षण गर्ने सामथ्र्य नभएको जडता । तपाईंहरूसँग आलोचनात्मक चेत नै छैन । तपाईंहरूको सोच्ने एउटै तरिका मात्र छ । त्यही भएर तपाईंहरू आफै तय गर्नुहुन्छ– यही हो सोच्ने तरिका ।
ग्युरिन : राष्ट्रपति मदुरो, यो तथ्य हो । यी देशहरूले विपक्षी दलको नेतालाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकारिसकेका छन् । तपाईं ती देशहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
मदुरो : सर्वप्रथम त, यो सङ्ख्या पचास होइन । युरोपेली सङ्घलाई यसमा सामेल गर्न मिल्दैन ।
तपाईंले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने यस्ता सबै राजनीतिक हमला कहाँबाट भइरहेका छन् ? सत्ताविप्लवको अवस्था कहाँबाट आइरहेको छ ? कहाँबाट आउँछन् यी सबै कुरा ? कसैले पनि निर्वाचित नगरेको सरकारलाई भेनेजुएलामा थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । चोकमा घोषणा गरेको सरकार नितान्त असंवैधानिक र अनियमित छ । कहाँबाट आइरहेको छ यो ? ह्वाइट हाउसबाट ।
त्यसो त यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन । तर, डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिमा सम्बद्ध दसवटा सरकारले, देशले होइन, सरकारले मात्र यसो गरेका हुन् । तपाईंले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने यस्ता सबै राजनीतिक हमला कहाँबाट भइरहेका छन् ? सत्ताविप्लवको अवस्था कहाँबाट आइरहेको छ ? कहाँबाट आउँछन् यी सबै कुरा ? कसैले पनि निर्वाचित नगरेको सरकारलाई भेनेजुएलामा थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । चोकमा घोषणा गरेको सरकार नितान्त असंवैधानिक र अनियमित छ । कहाँबाट आइरहेको छ यो ? ह्वाइट हाउसबाट । कसले चलाइरहेको छ यो सबै खेल ? डोनाल्ड ट्रम्पले । ह्वाइट हाउसभित्रको अतिवादले भेनेजुएलामा सत्ताविप्लव थोपर्न आफै अघि सरेका छन् । हामीले यो अस्वीकार गरेका छौँ, सिङ्गो विश्वले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । आज पश्चिमा प्रचारबाजी निकै राक्षसी तरिकाले बेगवान बनिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिले निरन्तरता पाएको छ । म युरोप, लन्डन, बेलायत लगायत सम्पूर्ण विश्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्– संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र उल्लङ्घन गरेर डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरिरहेको पूर्णतः अतिवादी अवैधानिक राजनीतिलाई साथ दिएर तपाईंहरू कतै बन्द गल्लीमा त फस्दै हुनुहुन्न ? असफलताको अचानोमा त पर्ने होइन ? भेनेजुएला यो कुरामा समर्थन गर्न सक्दैन ।
जनताको मतले मात्र भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्छ । कसैले लन्डनको कुनै चोकमा उभिएर आफूलाई बेलायतको महारानी वा प्रधानमन्त्री घोषणा गरे र उसलाई दुई–चार सरकारले समर्थन गरे के होला ? यो त चकित पार्ने घटना हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो सबभन्दा ठूलो राजनीतिक आश्चर्य हुनेछ । भेनेजुएलामा संविधानअनुसार जनताले मतदान गर्छन् । जनताले नै कसैलाई सत्तामा राख्न वा निकाल्न सक्छ ।
ग्युरिन : तपाईंले सबै कुराको निर्णय सरकारले गर्ने कुरा भन्नुभयो । त्यसो भए किन नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको आह्वान गर्नुहुन्न ? स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनमार्फत जनतालाई आफ्नो कुरा भन्न दिऊँ । को राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा यतिबेला तपाईंको देश निकै विभाजित भएको देखिएको छ ।
मदुरो : कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ, को राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस–छलफल हुनसक्छ । तर हरेक देशमा चुनावको निश्चित तालिका हुने गर्दछ । हरेक देशको आफ्नै चुनावी कानुन हुन्छ । गएका अठार महिनामा भेनेजुएलामा २३ जना गर्भनर छान्न चुनाव सम्पन्न भयो । २३ जनामध्ये हामीले १९ स्थानमा जित्यौँ । भेनेजुएलामा ३३५ नगरपालिका छन् । ३३५ नगरपालिकामध्ये ३०७ वटामा हामीले चुनाव जित्यौँ । हामीले चुन्यौँ र बितेका १८ महिनामा ६ पटक निर्वाचन भइसकेका छन् । गएको वर्षको २० मेको दिन हामीले संविधानअनुसार देशको राष्ट्रपति चुन्न निर्वाचन गर्यौँ । मैले कुल मतको ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेँ । विपक्षीले त्यतिबेला पनि अमेरिकी सरकारको सल्लाहमा निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।
ग्युरिन : के तपाईं अब राष्ट्रपति निर्वाचन जित्न सक्नुहुन्छ ?
मदुरो : मैले त चुनाव जितिसकेँ । पछिल्लो समयमा भएका सबै निर्वाचनले मैले प्रतिनिधित्व गरेको द पपुलर बोलिभारियन फोर्ससँग सामाजिक बहुमत, सांस्कृतिक, राजनीतिक र चुनावी बहुमत भएको पुष्टि गरेको छ । हामीले चुनाव जितेका छौँ । बितेका बीस वर्षमा भेनेजुएलामा भएका २५ निर्वाचनमध्ये २३ निर्वाचन त हामी जितेका छौँ । राष्ट्रपति चुनाव, गर्भनरको चुनाव, मेयरको चुनाव, संसदको चुनाव, जनमतसङ्ग्रहमा हामीले जितेका छौँ ।
ग्युरिन : तर, धेरैले ती चुनाव निष्पक्ष भएका थिएनन् । विशेषतः पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दैछन् । बुथ कब्जा गरेको र विपक्षलाई भाग लिन नदिएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् । पछिल्लो चुनाव समान सतहमा उभिएर गरिएको चुनाव नभएको भनाइ छ । त्यसैकारण पछिल्लो चुनावको नतिजालाई सन्देहका साथ हेरिएको छ । तपाईंलाई आगामी चुनावमा पनि आफ्नो विजय हुन पक्का भए नयाँ निर्वाचनमा जान किन डराउनुहुन्छ ?
मदुरो : चुनाव फेरि दोहोर्याउनुको तर्क र कारण के हुन् ? निर्वाचनका लागि सबभन्दा माथिल्लो न्यायिक शाखा भनेको निर्वाचन आयोग हो र निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि प्रकारको वैधानिक प्रश्न उठेको छैन । जति पनि प्रश्न उठेका छन्, राजनीतिक प्रश्न उठाइएका छन् । कसले उठाइरहेको छ ? अमेरिकाको सरकारले । चुनाव हुनुभन्दा चार महिनाअघि सन् २०१८ को जनवरीदेखि नै अमेरिकी सरकारले भेनेजुएलामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको कुनै पनि नतिजालाई मान्यता नदिने सङ्केत गरिसकेको थियो । त्यतिबेला त हामीले चुनावको मितिसमेत घोषणा गरेका थिएनौँ । हेर्नोस्, ग्युरिन यो प्रष्टतः युद्ध हो । तपाईंलाई यो कुरा बुझ्न भगवानले विवेक देओस् । बीबीसी हेरिरहनुभएका दर्शकलाई पनि यो सद्बुद्धि देओस् । यो अमेरिकाले थालेको युद्ध हो । आज सत्तासीन अतिदक्षिणपन्थी वर्ग, कु क्लक्स क्लानको स्वार्थको लागि यो हमला भइरहेको हो । ह्वाइट हाउसमा शासन गर्ने वर्गले भेनेजुयलयामाथि कब्जा जमाउन यस्तो गरिरहेका छन् । भेनेजुएलामाथि कब्जा जमाउन उनीहरूसँग राजनीतिक रणनीति, सञ्चार, कूटनीति, युद्धपिपासु चरित्र छ । हामी हाम्रो देशका सबै सत्यलाई बोकेर सबै प्रकारका अतिरञ्जना भत्काउँदैछौँ । हरेक दिन रटान लगाइने झुठको विरोध गरिरहेका छौँ ।
ग्युरिन : के तपाईं वास्तवमै अमेरिकामा कु क्लक्स क्लानले शासन गरिरहेको सोच्नुहुन्छ ?
मदुरो : अमेरिकामा कु क्लक्स क्लानको गोरा अहंकारवादीको अतिवादी समूहले अमेरिकाको नेतृत्व गरिरहेको म विश्वास गर्छु । यो अतिवादीहरूको डफ्फा भएको म विश्वास गर्छु ।
ग्युरिन : के तपाईं राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गोरा अहंकारवादी भन्दै हुनुहुन्छ ?
मदुरो : सबैको सामु खुलमखुला उनी गोरा अहंकारवादी हुन् । अमेरिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा उनी फासीवादी सोचलाई उकास्दैछन् । नवफासीवादी, नवनाजीवादी सोचको प्रवद्र्धन गर्दैछन् ।
किन ? एउटा शान्तिपूर्ण देश भेनेजुएलामाथि युद्ध घोषणा गर्नुको कारण, अवस्था र मनसाय के हो ? म संसारका जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु–निद्राबाट ब्युँझनुस् । आँखा उघार्नुस् । एउटा शान्त देशविरुद्ध कसरी हमला भइरहेको छ । संसारका धेरै देशमा जस्तै भेनेजुएलामा पनि समस्याहरू छन् । तर, शान्तिपूर्ण अवस्थामा मात्र ती समस्याका समाधान हुनसक्छन् । तपाईं वास्तवमै भेनेजुएलामा सहयोगको हात बढाइरहनु भएको छ भने तपाईंले शान्तिलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।
ग्युरिन : तपाईंले अमेरिकीहरूलाई भेनेजुएलाबाट हात झिक्न भन्नुभयो । यो कुरा जायज छ । किनभने भेनेजुएला तपाईंको देश हो । तर, के तपाईं ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट पनि आलोचना सामना गरिरहेको मान्नुहुन्छ ? यतिबेला वासिङ्टनले मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकाका अन्य छिमेकी देशहरूले पनि तपाईंको आलोचना गरिरहेका छन् ।
मदुरो : दुर्भाग्यवश केही देशमा यतिबेला अतिदक्षिणपन्थी सरकारहरू शक्तिमा छन् । कोलोम्बिया र चिलीका सरकारहरू यसका दृष्टान्त हुन् । चिलीका राष्ट्रपति पिनेरा पिनोचेको परम्पराबाट आएका हुन् । अर्जेन्टिनाको मार्की पनि उही परम्परामा आधारित हुन् । यतिबेला उनीहरूले अतिदक्षिणपन्थी मोर्चा निर्माण गरिरहेका छन् ।
ग्युरिन : तर युरोपले त तपाईंको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ नि । ह्वाइट हाउस मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकामा तपाईंका छिमेकमा रहेका केही देश मात्र होइनन्, युरोपका शक्तिशाली देशहरू पनि यो कुरा उठाइरहेका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पले लात मारेपछि युरोपका केही देश, केही सरकार डोनाल्ड ट्रम्पको पछाडि लाग्नु दुःखद् कुरा हो । उनीहरू बिनाकारण डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्णतः अवैधानिक नीतिको पछि लागेका छन् ।
मदुरो : डोनाल्ड ट्रम्पले लात मारेपछि युरोपका केही देश, केही सरकार डोनाल्ड ट्रम्पको पछाडि लाग्नु दुःखद् कुरा हो । उनीहरू बिनाकारण डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्णतः अवैधानिक नीतिको पछि लागेका छन् । युरोपेली सङ्घका राजदूतहरूसँग म बरोबर बैठक बसेको छु । मैले उनीहरूका संविधान पढेको छु । मैले उनीहरूलाई खेलको आपसी सम्मानको कानुनभन्दा बाहिर गएको भनी प्रष्ट बताएको छु । उनीहरूले भन्ने गरेका कुराहरू झुठा छन् । गलत निर्णय गरेका र निर्णय लिन पर्खिबसेका देशहरू समेत सबै युरोपेली देशहरूबाट मैले वास्तवमै बढी आशा गरेको छु । उनीहरूले हामीलाई सुन्नेमा म आशावादी छु । मैले उनीहरूलाई भनी पनि सकेको छु– उनीहरू एकपक्षीय कुरा मात्र सुनिरहेका छन् । युरोपेली सङ्घले जारी गरेका जति पनि वक्तव्य र भनाइहरू छन्, सबै भेनेजुएली अतिदक्षिणपन्थी शक्तिले भन्दै आएको कुराको पूर्णतः पुनःउत्पादन मात्र बनिरहेको छ । यस्तो हुनुहुन्नथ्यो ।
ग्युरिन : द बैङ्क अफ इङ्ल्यान्डमा तपाईंहरूको कति सुन रोक्का गरिएको छ ? भेनेजुएलाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डमार्फत आफ्नो पहुँचमा ल्याउन खोजिरहनुभएको छ । कति सुन रोक्का गरिएको छ र तपाईंहरूले त्यो निकाल्ने कुनै मौका पाउनुभयो कि पाउनुभएन ?
मदुरो : बेलायतमा थपघट ८० टन सुन हुनुपर्छ । वैधानिक रूपमा त्यो सुन भेनेजुएलाको हो ।
ग्युरिन : बेलायतको सरकार र प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
ग्युरिन : तपाईंले लड्नका लागि तयार भएको बताउनुभयो । यदि अमेरिकाले भेनेजुएलाको सिमाना नाघेर आए के तपाईं सशस्त्र प्रतिरोध गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
मदुरो : त्यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले हामीलाई अर्को कुनै विकल्प छोडेको हुनेछैन । हाम्रो देशको अस्तित्वको अधिकारका लागि हामीले प्रतिकार गर्नैैपर्ने हुन्छ । शान्तिपँर्वक बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार हामीले जोगाउनै पर्ने हुन्छ । त्यस्तो हुनेछैन भन्नेमा म आशा गर्छु । जनताको मत शान्तिको पक्षमा हुनेमा म आशा गर्छु । भेनेजुएली जनता कति भद्र छन् भन्ने कुरा उनीहरूले देखून् । हाम्रा समस्याबारे शान्तिपूर्वक कुराकानी अधिकार हामीलाई छ । कसैले पनि भेनेजुएलामा हस्तक्षेप नगरोस् । कसैले पनि । संसारभरका शक्तिशाली जनमतसामु ह्वाइट हाउसको त्यो अतिवादी समँह पराजीत भइसकेको छ । म यसमा विश्वास गर्छु । म आस्तिक हुँ । म क्रिस्चियन हुँ र म सधैँ ईश्वरसामु हामीलाई सद्बुद्धि दिन र रक्षा गर्न प्रार्थना गर्छु । हामीले सबै कुरा शान्तिपूर्वक नै हासिल गर्नेमा म आस्था राख्छु ।
ग्युरिन : विपक्षहरू स्वयंसेवकहरूको कुरा गरिरहेका छन् । भेनेजुएलाभित्र सहायता सामग्री भित्र्याउन मानिस परिचालन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यदि उनीहरूले त्यस्तो प्रयास गरे के तपाईंहरूले उनीहरूमाथि गोली वर्षाउनुहुन्छ ?
मदुरो : हामीले त्यस्तो कहिल्यै गरेनौँ । हामी त्यस्तो कहिल्यै गर्दैनौँ । विपक्षीको आफ्नै रणनीति र राजनीति छ । उनीहरू आफ्नै प्रकारले काम गर्न सक्छन् । यो देशमा उनीहरूले जे चाहन्छन्, त्यसै गर्न स्वतन्त्रता राख्छन् । तर, त्यस्तो खालको दमन न कहिल्यै भएको थियो न हुने नै छ ।
ग्युरिन : तर, सरकारविरोधी प्रदर्शनको क्रममा त मानिस मारिएका छन् नि । गएको महिना मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चालिस जना मानिस मारिएको बताएको थियो । तीमध्ये झण्डै २६ जना सुरक्षाकर्मीले मारेको बताएको थियो । मानिसहरूले अझै प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमले त्यस्तो भेनेजुएला देखाइरहेका छन्, जो यहाँमा सडक हुने गरेको हुँदैन । गएको जनवरी २३ मा ठूला जुलुस भएका थिए । विपक्षीहरूले पनि ठूलो जुलुस निकाले, हामीले पनि निकाल्यौँ । ती तस्बिर र सडकमा तनावका अन्य तस्बिर देखाएर उनीहरू बितेका पन्ध्र दिनदेखि भेनेजुएलामा ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेको फलाकिरहेका छन् ।
मदुरो : कुन प्रदर्शन ? उनीहरू बढीमा पन्ध्र दिन टिक्ने कुनै पनि आन्दोलन गरेको कुनै पनि प्रमाण देखाउन सक्दैनन् । मैले हेरेको छु । म अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यम हेर्ने गर्छु । अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमले त्यस्तो भेनेजुएला देखाइरहेका छन्, जो यहाँमा सडक हुने गरेको हुँदैन । गएको जनवरी २३ मा ठूला जुलुस भएका थिए । विपक्षीहरूले पनि ठूलो जुलुस निकाले, हामीले पनि निकाल्यौँ । ती तस्बिर र सडकमा तनावका अन्य तस्बिर देखाएर उनीहरू बितेका पन्ध्र दिनदेखि भेनेजुएलामा ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेको फलाकिरहेका छन् । जनवरीको २५, २८, २९ र फेब्रुअरी १ मा मलाई फोनमार्फत सम्पर्क गर्ने संसारका विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले मलाई सोध्दै थिए– के भेनेजुएलाका सडकमा ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेका छन् ? मैले भने, “अहँ छैन । भेनेजुएला आफ्नै काममा मस्त छ । भेनेजुएलामा शान्ति छ ।”
ग्युरिन : धेरै ठूलठूला विरोध प्रदर्शन भएका थिए । तीमध्ये केही प्रदर्शन त हामी स्वयंले पनि देखेका छौँ । हामीले तपाईंका समर्थकहरू पनि देखेको थियौँ । विपक्षीहरूले धेरै सङ्ख्यामा मानिस सडकमा उतारेको र उनीहरू परिवर्तनको आह्वान गर्दै सडकमा प्रदर्शनमा उत्रेकोमा के तपाईं विमति राख्नुहुन्छ ?
मदुरो : हो, मैले पनि देखेको छु । विरोध गर्ने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित राखिएको छ । हामीले जस्तै विपक्षीहरू पनि ठूला प्रदर्शन गरेका छन् । भेनेजुएलाको प्रजातन्त्र गतिशील प्रजातन्त्र हो । क्रान्तिको समर्थन गर्ने मानिस पनि छन्, क्रान्तिको विरोध गर्ने जनता पनि छन् । उनीहरू जतिबेला पनि प्रदर्शन गर्न पाउँछन्, उनीहरूको त्यो अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । मैले सधैँ भन्ने गर्छु, उनीहरूले गर्ने सबै त्यस्ता प्रदर्शन शान्तिपूर्वक होस् । उनीहरूभित्र सानो आकारको हिंसात्मक टोलीहरू छन् । विपक्षीहरूका विरोध प्रदर्शन जब सकिन्छ तब जहिल्यै उनीहरू शान्ति सुव्यवस्थामा दखल पुर्याउन प्रहरीसँग भीड्न निहुँ खोज्ने गर्छन् । विपक्षीले जति पटक मनपर्छ, त्यत्ति पटक प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आफ्ना नारा र माग राख्न सक्छन् । हामीले पनि जनपरिचालन गर्छौं । सुखद् पक्ष भनेको हामी जनतासँग गतिशील प्रजातन्त्र छ ।
ग्युरिन : तपाईंले सत्ता छोड्ने कुनै प्रकारको अवस्था छ ?
मदुरो : हेर्नोस् ग्युरिन, व्यक्तिको रूपमा शक्तिमा बसिरहनु मेरो चाहना होइन । शक्ति छोड्नु पनि मेरो व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्ने विषय होइन । म सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलनको हिस्सा हुँ । त्यही जनताको आन्दोलनले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेको हो । संविधानद्वारा निदृष्ट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर, चुनावी आवश्यकता पूरा गरेर मलाई दिएको यो म्यान्डेट निकै शक्तिशाली छ । त्यो म्यान्डेट मैले जीवन दिएर पूरा गर्नुछ । मैले त्यसैका लागि शपथ खाएको छु । मैले सर्वोच्च अदालतसामु संविधान जोगाउन र बलियो बनाउन आफ्नो ज्यान दिने सपथ खाएको छु । यो म्यान्डेट हो । जनताले दिएको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव सबै काम म गर्नेछु ।
ग्युरिन : तपाईंलाई सेनाको समर्थन अझै छ भन्ने कुरामा तपाईंलाई कति विश्वास छ ? सेनाभित्र एक प्रकारको त्रास व्याप्त छ । तपाईंको विरोधमा बोल्ने कोही पनि मानिसलाई जेल कोचिएको छ ।
भेनेजुएलाको संविधानअनुसार म नै यतिबेलाको राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुँ । म नै प्रधानसेनापति हुँ । उनीहरू बफादार छन् किनभने उनीहरूमा विवेक छ र नैतिकवान् छन् । उनीहरू विद्रोही सेना होइनन् । उनीहरू अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प साम्राज्यको स्वार्थको सेवा गर्ने सशस्त्र सेना होइन ।
मदुरो : मविरुद्ध चलिरहेको प्रचार अभियानले बनाएको यो अर्को मिथक हो । भेनेजुएलाको राष्ट्रिय बोलिभारियाली सशस्त्र सेना संरचनागत रूपमै मानवतावादी छ । उनीहरू बोलिभारियाली छन् । प्रजातान्त्रिक छन् । संरचनागत रूपमा संस्थागत छन् । आफ्नै मूल्य र नयाँ चिन्तनमा बनेको सेना हो त्यो । प्राध्यापकहरूबाट पढाइने र नियमित शिक्षणको परिपाटी बनेको सेना हो भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सेना । यो नयाँ किसिमको सशस्त्र फौज हो । जथाभावी मानिसको समूहले बनेको सेना होइन भेनेजुएली राष्ट्रिय सेना । वास्तवमा यो सेना सेना मात्र पनि होइन । न त यो विद्रोही सेना नै हो । यो पिनोचे (चिलीका पूर्व तानाशाह) शैलीको सेना होइन । न यो त्यस्तो बन्ने नै छ । यो सेना भेनेजुएलाको संविधानप्रति बफादार सेना हो । संविधानप्रति दृढतापूर्वक बफादार सेना । सुरक्षामा परिचालित । देशको रक्षाका लागि आफैलाई सदा तयार राख्ने सेना । उच्च नैतिक मूल्य मान्यता बोकेको सेना । उनीहरू सिद्धान्तनिष्ठ छन् । उनीहरू संविधानले देखाएको आफ्नो प्रधानसेनापतिप्रति बफादार छन् । यतिबेला उनीहरूको प्रधानसेनापति बनेको निकोलस मदुरो हो । भेनेजुएलाको संविधानअनुसार म नै यतिबेलाको राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुँ । म नै प्रधानसेनापति हुँ । उनीहरू बफादार छन् किनभने उनीहरूमा विवेक छ र नैतिकवान् छन् । उनीहरू विद्रोही सेना होइनन् । उनीहरू अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प साम्राज्यको स्वार्थको सेवा गर्ने सशस्त्र सेना होइन । डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटरमा आदेश दिएका छन् । यो पत्याउनै गाह्रो कुरा छ, ग्युरिन । डोनाल्ड ट्रम्प, जोन बोल्टन, माइक पम्पेओ, माइक पेन्स– उनीहरूले भेनेजुएलाको सेनालाई आफ्नो देशका राष्ट्रपतिविरुद्ध विद्रोह गर्न आदेश दिएका छन् । यो त हद पार गरेको अवस्था हो नि । मलाई लाग्छ, आजसम्म संसारका कुनै पनि देशको सन्दर्भमा यस्तो सीमा पार गरिएको थिएन । तर सेना अहिले कहाँ छ ? के उनीहरू डोनाल्ड ट्रम्पको आदेश माने ? अहँ गएनन् । सेना बफादार छन् । आफ्नो देश र संविधानप्रति उनीहरू बफादार छन् र आफ्नो प्रधानसेनापतिलाई वैधानिक प्रमुख मानेका छन् । कमान्डर ह्युगो चाभेजको समयदेखि नै यो तहको सम्बन्ध कायम हुँदै आएको हो । त्यसकारण यो सम्बन्ध निकै गहिरो, इमान्दार र सबै सैनिक अधिकारी, सेना र सिपाहीहरूबीचको वस्तुगत सम्बन्ध हो । अनि यो नै हाम्रो देशको सबभन्दा बलियो शक्ति हो ।
ग्युरिन : ह्युगो चाभेजले आजको भेनेजुएला देखेका भए के भन्नुहुन्थ्यो होला ?
मदुरो : जसरी पहिला आफ्नो देशको लागि लड्न उनी उत्प्रेरित हुने गर्दथे, त्यसरी नै उत्पे्ररित हुने थिए । सन् २००२ को अप्रिल ११ र १२ मा तत्कालीन जर्ज डब्ल्यु बुश सरकारले चाभेजविरुद्ध सत्ताविप्लव गराउन यस्तै प्रयास गर्दा उनले यस्तो प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । उनलाई अपहरण गरिएको थियो । उनीहरूले चाभेजको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए । तर चाभेज एक सेकेन्डका लागि पनि आत्तिएनन् । आफ्नो सिद्धान्त जोगाउन कति पनि हरेस खाएनन् । आफ्नो आदर्श जोगाउन र जीवनको लागि लड्न कति पनि पछि सर्नुभएन । त्यसैकारण चाभेज हाम्रो लागि ठूलो प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । म पनि सधैँ सोच्छु– यस्तो अवस्थाम चाभेज भइदिए के गर्नुहुन्थ्यो होला ? त्यही प्रश्नले मलाई अगाडिको सही बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्दै आएको छ । हरेक दिन के गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्यौल गर्न मद्दत गर्दै आएको छ ।
ग्युरिन : एउटा अन्तिम प्रश्न । यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोलोम्बियाको सिमानामा ५ हजार सेना तैनाथ गरे तपाईंले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ ?
उनले चाहे ५ हजार किन, लाखौँ सेना नै राखे पनि सक्छन् । कोलोम्बियाको सिमानाभित्र भए उनले लाखौँ ट्याङ्क ल्याउन सक्छन् । लाखौँ लडाकु विमान र लाखौँ लाख सिपाही ल्याउन सक्छन् । यसमा केही समस्या छैन । कोलोम्बियाको सिमानाभित्र बसेसम्म कुनै समस्या हुनेछैन ।
मदुरो : उनले चाहे ५ हजार किन, लाखौँ सेना नै राखे पनि सक्छन् । कोलोम्बियाको सिमानाभित्र भए उनले लाखौँ ट्याङ्क ल्याउन सक्छन् । लाखौँ लडाकु विमान र लाखौँ लाख सिपाही ल्याउन सक्छन् । यसमा केही समस्या छैन । कोलोम्बियाको सिमानाभित्र बसेसम्म कुनै समस्या हुनेछैन । हामी भेनेजुएलाको रक्षा गर्छाैं र उनीहरूलाई भेनेजुएलाप्रति सम्मान गर्नुपर्ने बनाउँछौँ । संसारको विवेकले र संसारका उत्पीडित जनताको एकताले डोनाल्ड ट्रम्पको हात बाँध्नुपर्छ । ल्याटिन अमेरिकामा नयाँ युद्ध सुरु गर्न डोनाल्ड ट्रम्पलाई रोक्नुपर्छ । म संसारभरका सबै जनतालाई विचारधाराभन्दा माथि उठेर विवेकपूर्वक सक्रिय ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गर्छु । भेनेजुएलामा युद्ध हुन नदिऔँ । भेनेजुएलामा हमला हुन नदिऔँ । सबैले डोनाल्ड ट्रम्पलाई भनौँ– भेनेजुएलाबाट हात झिक । भेनेजुएला शान्ति, अमनचयन र खुसी चाहन्छ ।
ग्युरिन : विनाअनुमति कुनै पानी जहाज भेनेजुएलाभित्र आए के तपाईंहरू गोली हान्नुहुन्छ ? कुनै विमान विनाअनुमतिभित्र पसे के तपाईं आक्रमण गर्नुहुन्छ ?
मदुरो : उनीहरूले हामीबाट चोरेको डलर राखेर पानीजहाज पठाउनुपर्छ । ८० टन हाम्रो सुनसहितको पानीजहाज पठाउनुपर्छ । पैसा राखिएको पानी जहाज आओस् । हाम्रो पैसाले भरिएको जहाज । त्यो पैसाले हामी हाम्रो देशका समस्या समाधान गर्ने थियौँ ।
ग्युरिन : भोकोले पिरोलिएका मानिसहरू, खाने कुरा नपाएका मानिस, स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेका मानिस, इन्धन नपाएर आत्तिएका मानिसहरूलाई तपाईं यतिबेला के भन्नुहुन्छ ?
मदुरो : मैले केही भन्नुभन्दा पनि उनीहरूको लागि केही गर्छु । म रोजगारी सिर्जना गर्नेछु । निवृत्तिभरण व्यवस्था गर्नतिर लाग्नेछु । भेनेजुएलाका परिवारको रक्षाका लागि काम गर्नेछु, यो कामलाई निरन्तरता दिनेछु । चरम गरिबी घटाउन मिहिनेत गर्नेछु । सन् २०१७ देखि २०२५ भित्रमा हामीले गरिबीलाई शून्यमा पुर्याउने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र हामी त्यो उपलब्धि हासिल गर्नेछौँ । हामी के गर्नेछौँ, तपाईंले देख्नुहुनेछ ।
ग्युरिन : अब अन्तिम प्रश्न । भेनेजुएलामा आजभोलि चिज किलोको कति पर्छ तपाईंलाई थाहा छ ?
मदुरो : त्यो त क्षेत्रअनुसार फरक फरक छ ।
ग्युरिन : हामीलाई बताइएअनुुसार भेनेजुएलामा एक किलो चिजको मूल्य एक महिनाको तलब बराबर हुन आउँछ ।
मदुरो : हामीकहाँ तलबको दर फरक फरक छ । यो नितान्त भेनेजुएलाको मामिला हो ।
मलाई लाग्छ, तपाईंका दर्शकलाई यो विषयमा कुनै चासो होला । तर, हेर्नोस्, यदि हामीसँग भेनेजुएली जनताको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षाको तुलना गर्ने समय भएको भए तपाईंका दर्शकले यो विषयमा अझ प्रष्ट कुरा बुझ्नु हुने थियो । आजलाई यति मात्र भनौँ, भेनेजुएलामा हामीसँग रोजगार सिर्जना गर्ने सामाजिक सुरक्षा नीति छ । भेनेजुएली जनताले आफ्ना समस्या आफ्नै तरिकाले प्रगतिशील तरिकाबाट समाधान गर्दैजानेछ । त्योबाहेक उनीहरूले केही चाहेका छैनन् । म तपाईंलाई यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
ग्युरिन : तपाईंले बेलायतका विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोरबनबारे यो सङ्कटको बारेमा सुन्नुभएको छ ? तपाईंलाई उहाँले पुग्दो सहयोग नगरेको जस्तो लाग्छ ? विगतमा उनी भेनेजुएलाका बलिया समर्थक थिए ।
मदुरो : अहँ । उहाँसँग मेरो कुरा भएको छैन ।
ग्युरिन : के तपाईंलाई उहाँले समर्थन चालु राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
मदुरो : मेरो विचारमा उहाँ बेलायतको नेता बन्न चालु राख्न जरुरी छ ।